I-Waterfront Luxury Resort Manor Number One Penrith - I-Airbnb
I-Waterfront Luxury Resort Manor Number One Penrith
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMargot & Le-Anne
UMargot & Le-Anne yi-Superhost
Sienna Waters Prestigious Property ngqo Nepean River Frontage-Iphangalele Hampton House Timber 1960's. Amagumbi okulala ama-4 amnandi, indawo yokuhlala. Iindawo zokuhlala ezinkulu, iifenitshala ezikumgangatho ophezulu. Ekhaya kude neKhaya.. Bukela uchulumanco kunye nobuhle njengoko abaXhasi bedlula, njengoko ukutshona kwelanga kubonakalisa imibala yomlingo phezu koMlambo. Indawo yokuphila esempilweni, ekwiMbali ye-7 Mile River Walk. Indawo entle kuzo zonke izinto ezithandwa ngabakhenkethi, iikhefi ezinesitayile, indawo yokuthenga kunye neJoan Sutherland Theatre.
Sienna Waters Prestigious Hampton House Classic CountryTimber isitayile sika-1960, esikwesona sitrato sigqwesileyo, kunxweme loMlambo iNepean.
Iindwendwe zethu zonwabela ukuhlala okutofotofo ngenene, kubandakanywa nezinto eziluncedo
* Isidlo sakusasa seGourmet esithotyelwayo kwintsasa yakho yokuqala
* Iindawo ezinkulu zokuhlala, iisilingi eziphakamileyo, iifestile ezinkulu zeglasi ezijonge umbono ophefumlayo woMlambo iNepean, unempahla enesitayile, ukwenza uzive usekhaya.
*Igumbi lokulala elikhulu eliphambili elineTempur yeedola ezingama-4,000 zoomatrasi, iCarrara yanamhlanje enethayile ye-Ensuite, amanye amagumbi okulala amathathu amakhulu anomandlalo obalaseleyo anegumbi lokuhlambela elikhulu.
* Isantya esiphezulu seWiFi, iTV yeFlatscreen
* Umva umjikelo we-air conditioner ukuze ufudumeze kwaye upholise indlu, kunye nezifudumezi ezongezelelweyo ukunika intuthuzelo
* Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo kunye nazo zonke izixhobo zombane, izixhobo zombane kunye nesiseko sepantry esigcweleyo ukuncedisa ekuphekeni ngokubanzi.
*Isitulo seFrench Oak esisi-8 seDining Dining Table ene-decor ephezulu
*I-BBQ yangaphandle yedesika ibekwe phezulu ukonyusa i-vista eyonwabisayo phezu koMlambo iNepean
* Izitiya ezinomhlaba, ukonwabisa kwaye uphumle. Eyothusayo iPort Wine Magnolia kunye nezinye izityalo zegadi ziyonwabisa
Bukela uchulumanco kunye nobuhle njengoko abaXhasi bedlula, okanye njengoko ukutshona kwelanga kubonakalisa imibala yeLanga emanzini. Ukusetwa kwetafile yangaphandle ukuze uhlale ngasemva kwaye ubukele ubuhle boMlambo, kwindawo yakho yabucala. Ubomi beentaka ezimangalisayo kwabo bathanda indalo. Endleleni-iNdawo yokuPhila ngokuPhila, thatha uhambo okanye ubaleke ujikeleze iHeritage Seven Mile River ebukekayo. INdawo eValekileyo yoLonwabo, iJoan Sutherland yaseQonga leQiniso leThiyetha, iindawo zokutyela kunye neekhefi. Ukuthenga eWestfield kunye nabathengisi beendlela zangoku kunye neekhefi ezifashisayo. Okanye uhambe uye kwiintaba eziluhlaza, ubuyela kwindawo yakho yokuhlala ephupheni. I-Sienna Waters likhaya lokuhlala elinela mvakalelo imnandi ilungileyo, uyolo ukwabelana neendwendwe. Isitayile sokuchithela iiholide uhlala nento eninzi yokwenza, kanye emnyango wakho; yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala kwindawo yokuphumla yothando, umbhiyozo wepati yoMtshato woMtshato, iholide ezele zintshukumo, okanye indawo yokuhlala eneempawu ezibalulekileyo zokuphila. Samkela iindwendwe zamazwe ngamazwe ezikhethe ukuhlala kwindawo enjalo eSienna Waters, kwindawo ekhuselekileyo enobuhlobo eneendawo eziphezulu zabakhenkethi ezifikeleleka lula.
Le ayisiyondlu yepati. Umlimi wegadi osisigxina uhlala ejongana nepropathi.
4.72 · Izimvo eziyi-141
IPenrith yeyona ndawo imangalisayo ye-NSW, ngakuMlambo iNepean entle, kwaye ingcono iSienna Water ibekwe kwesona sitrato sihloniphekileyo sinomphambili weNepean River, esime kwiHeritage Seven Mile River Walk thatha uhambo okanye ubaleke. Yonwabela ubuhle bendawo ejikelezileyo, phuma uye kwisitrato esihle kwaye wonwabele umoya omnandi wemihla ngemihla wabanye abahamba ngendlela edumileyo.
Umoya ozolileyo nomkhulu wabahlali, ufikeleleka ngokulula kuzo zonke iikhefi, iivenkile, kufutshane nohola wendlela, ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke. Iqela leRowers kwimizuzu nje emi-5 kude, iCable Water ski park kwaye ndibhabha nje ndinyuke ngendlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Margot & Le-Anne
Siyafumaneka ukunceda ukufikelela kunye naziphi na izicelo ezingxamisekileyo. Kuphela umnxeba kude.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-22697
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Penrith